Macedonian Online Casino Sites | Online Casino Bonus Codes
(345 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ...ယနေ့တွင်မက်ဆီဒိုးနီးယားသည်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လှပသောတောင်တန်းများအပြင်ရေကန်များနှင့်သန့်ရှင်းသောလေများအပြင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ လောင်းကစားခြင်းသည်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်၊ တိုင်းပြည်တွင်တရားဝင်လိုင်စင်စနစ်ရှိသည်။ လိုင်စင်ရပြီးနောက်လောင်းကစားရုံဖွင့်နိုင်သည်။ လောင်းကစားရုံမှအမြတ်အစွန်းအချို့သည်လူမှုရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်တိုင်းပြည်၏တိုးတက်မှုကိုရသည်။ လောင်းကစားခြင်းသည်ဒေသခံများအကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်၊ ၁၈ နှစ်ကျော်သူများအတွက်ကစားခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားလမ်းညွှန်သို့ visitors ည့်သည်များအတွက်သတိပြုပါ။ မက်ဆီဒိုးနီးယားရှိမြေယာလောင်းကစားရုံများအပြင်စာအုပ်ဆိုင်များစွာလည်းရှိသည်။ အားကစားပွဲများကိုအထူးပြုသည့်ဘွတ်ကမူကားများသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ နိုင်ငံအတွင်းနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဘဏ္Financeာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှလိုင်စင်ရစာအုပ်ပေါင်း ၈၀ ကျော်အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးစာအုပ်ထုတ်လုပ်သူအရေအတွက်တိုးများလာသည်။
ထိပ်တန်း 10 Macedonian အဘိဓါန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
အထူးသဖြင့် ၂၅ နှစ်အောက်လူငယ်များအကြားအွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းသည်မက်ဆီဒိုးနီးယားပြည်တွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ နိုင်ငံအတွင်းတွင်မက်ဆီဒိုးနီးယားနှင့်နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာများအဖြစ်အွန်လိုင်းလောင်းကစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုလုပ်ကိုင်သည်။ အစိုးရကမကြာသေးမီကအွန်လိုင်းလောင်းကစား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ရန်အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေသစ်များအရလိုင်စင်မဲ့ဆိုဒ်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုပိတ်ဆို့လိမ့်မည် Bodog နှင့် Partypoker ကဲ့သို့သောပံ့ပိုးသူများသည်နိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားမှကစားသမားများကိုလက်ခံပြီးအရည်အသွေးမြင့်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောဂိမ်းများကိုကမ်းလှမ်းသောအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဆိုဒ်များစာရင်းကိုကြည့်ပါ။ ဤနေရာတွင် slot machine မှလောင်းကစားရုံဂိမ်းများအထိဖျော်ဖြေမှုအမျိုးမျိုးကို NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming နှင့်အခြားသူများမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသောဖျော်ဖြေမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားမှကစားသမားများရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းအရောင်းမြှင့်တင်မှုများ၊ အပိုဆုကြေးများနှင့်ငွေပေးချေမှုပုံစံများကိုသတိပြုမိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းလောင်းကစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုလည်းသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယား - ဤတောင်တန်းရှုခင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောလေထု၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့်ရေဖောင်ဒေးရှင်း၊ ရေကန်များနှင့်လေ့လာရေးခရီးများစွာ။ တက်ကြွသောအားလပ်ရက်များကိုအပြည့်အ ၀ ပျော်မွေ့ရန်သူတို့လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လောင်းကစားရုံတစ်ခုတွင်ကစားရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်၎င်းသည် Las Vegas တွင်ဖြစ်မည်ဟုထင်ရသည်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာ Skopje ရှိ CasinoToplists ဖြစ်သည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယား၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောမြို့တော်။
မက်ဆီဒိုးနီးယား - ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊
ကာစီနိုဟိုတယ်နှင့်ကာစီနို Dojran hit;
ဟိုတယ် Epinal နှင့် LeGrand ကာစီနို;
ကာစီနို Flamingo ဟိုတယ်;
The Grand ကာစီနို။
လိပ်စာများနှင့်အတူမက်ဆီဒိုးနီးယား Skopje ၏မြို့တော်ငါးခုမြင်ကွင်းများ;
တိုင်းပြည်နှင့်၎င်း၏မြို့သားတို့နှင့် ပတ်သက်. အံ့သြဖွယ်အချက်အလက်များ။
မက်ဆီဒိုးနီးယားကိုမက်ဆီဒိုးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့မဟုတ်ယခင်ယူဂိုဆလားဗီးယားမက်ဆီဒိုးနီးယား (ကုလသမဂ္ဂတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် FYROM) ဟုမှန်ကန်စွာခေါ်ဝေါ်သောမက်ဆီဒိုးနီးယားသည်ဥရောပအလယ်ပိုင်းရှိနိုင်ငံငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနီးဆုံးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သောဆားဘီးယား၊ ကိုဆိုဗို၊ ဂရိ၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ချက်ချင်းမဟာအလက်ဇန်းဒါးနဲ့အတူအသင်းအဖွဲ့များ evokes သော်လည်းဂရိနိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်ပေါ်မှာတည်ရှိနေဆဲရှေးဟောင်းမက်ဆီဒိုးနီးယားမှာမွေးဖွားတဲ့မဟာအရှင်မင်းကြီးနှင့်စစ်ရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားပြည်နယ်သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနယ်မြေ၏ ၃၅% မျှသာပါဝင်ပြီး၎င်းသည်မက်ဆီဒိုးနီးယား၏သမိုင်းဝင်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြောင့်ခေတ်သစ်အမည်များကြောင့်နယ်မြေ၏ 1991% ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဂရိနိုင်ငံနှင့်အတူမြောက်မြားစွာအငြင်းပွားမှုများမွေးဖွားလာကြသည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့ပြီးဥရောပတိုက်သည်ရောမနှင့်ဘိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာ၊ ဘူဂေးရီးယားအင်ပါယာ၊ ဆားဘီးယားအင်ပါယာ၊ အော့တိုမန်အင်ပါယာ၊ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်နှင့်ဘော်လကန်စစ်ပွဲများ၏ပြည်သူများကိုများစွာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
၁၉၉၁ တွင်သွေးမဲ့သောမက်ဆီဒိုးနီးယားသည်ယူဂိုစလားဗီးယားမှခွဲထွက်ခဲ့သည်။ အခုတော့သူကပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာပြီ။ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများသည်ပြောင်းလဲမှုကိုထင်ရှားစေသည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားသည်။ အဆိုပါနိုင်ငံသည်အီးယူနှင့်နေတိုးတို့၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
တောက်ပသောလောင်းကစားအိမ်များနှင့်အဆုံးမဲ့စပျစ်ဥယျာဉ်များဖြစ်သောဂရိနယ်စပ်တွင်ခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်၏လှပသောမြို့တော် Skopje တွင်လောင်းကစားရုံများရှိသည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားဥပဒေသည်လောင်းကစားအော်ပရေတာများ၏အခွင့်အရေးသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားသို့မဟုတ် Expatriate များသည် အကယ်၍ ၎င်းတို့တွင်အချို့သောပမာဏရှိလျှင်ကာစီနိုလောင်းကစားကိုဖွင့်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လိုင်စင်ရပြီးနောက်ကာစီနိုကိုစည်းရုံးခွင့်ပြုနိုင်သည်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံရှိကာစီနိုလောင်းကစားရုံအများစုသည်တစ်ချိန်လုံးလည်ပတ်သော်လည်းအချိန်ဇယားကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ ည့်သည်များသည်အသက် ၁၈ နှစ်ဖြစ်ရမည်။ များသောအားဖြင့် ၀ တ်စားဆင်ယင်သည်ပေါ့ပါးသော ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုများပါ ၀ င်သော်လည်းထူးခြားသောအမှုများရှိသည်။
Skopje တွင်အဓိကလောင်းကစားရုံသုံးခုရှိသည်။ ကာစီနို ၂၃ - Bristol ဟိုတယ်၊ Le Grand Casino - Holiday Inn Hotel, Viva Casino ။
Ohrid တွင်အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံသည်ရှုပ်ထွေးသော Metropol Lake Resort & Casino ဖြစ်သည်။
Gevgelija တွင်လောင်းကစားဇုန်သည်အမှန်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ဤနေရာတွင်အဆင့်မြင့်သောအဆောက်အအုံများတည်ရှိပြီးအများဆုံးတောင်းဆိုမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်ကစားသမားများ - Casino Flamingo Hotel5*, Apollonia Casino, Casino Motel Senator, Princess International ။
Doyrane ခုနှစ်တွင်ကာစီနိုဟိုတယ်နှင့်ကာစီနို Dojran hit အခြေချခဲ့သည်။
အထင်ရှားဆုံးလောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ခြင်း Bitola ဟိုတယ် Epinal နှင့် LeGrand ကာစီနိုဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုနှင့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများစွာတို့ကြောင့်၎င်းတို့ထဲမှအနည်းငယ်သာရည်မှန်းချက်ကြီးကြသည်။ သို့သော်နေဆဲအထူးအာရုံစိုက်ထိုက်တန်ပါတယ် ကာစီနို Flamingo ဟိုတယ် Gevgelija အတွက်5။ *
ဤဇိမ်ခံစားသောက်ဆိုင်သည်ရဲတိုက်ငယ်လေးသို့မဟုတ်ယေဘူယျအားဖြင့်လူကြီးလူကောင်းတို့၏အသိုက်အ ၀ န်းအသိုက်နှင့်ဆင်တူသည်။ ပန်းခြံများ၏ရှေ့မှောက်၌တည်ရှိသည်။
လောင်းကစားခန်းမသည်ဖဲချပ်အမျိုးမျိုးနှင့် Blackjack ကစားခြင်းအတွက်စားပွဲ ၁၆ ခုနှင့်အမေရိကန်ကစားသည့်စားပွဲ ၁၀ ခုရှိသည်။ slot machines ၏ပရိသတ်များသည် ၄ ​​င်းတို့ကိုလုံလောက်စွာတွေ့လိမ့်မည် - ၄၄၀ slot များ။
Flamingo သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်၎င်းကိုပိုင်ရှင်အစားထိုးခဲ့သည်။ ယူရို ၂၅ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဇါတ်ရုံ မင်းသမီးအင်တာနေရှင်နယ် Gevgelija ကာစီနိုသည်နိုင်ငံတကာကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာအတားအဆီးမရှိခေတ်သစ်အဆောက်အ ဦ များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဇိမ်ခံဒီဇိုင်း။ စီစဉ်သူများသည်အထူးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ပုံမှန်ကျင်းပသောစုဝေးပွဲများ၊ ပွဲများ၊ အားလပ်ရက်အစီအစဉ်များ၊ ကြယ်တို့၏ဖျော်ဖြေပွဲများ။
Le Grand Casino - Holiday Inn ဟိုတယ် Skopje - ပျော်စရာညနေခင်းတစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု။ စတိုင်စားသောက်ဆိုင်သည် Vardar မြစ်ကမ်းနားတွင်တည်ရှိသည်။ အနီးအနားမှာ6ရာစု၏ခံတပ်နှင့် 15 ရာစု၏ကျောက်တံတားဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ကစားရန်ဖဲချပ် ၂ ချပ်၊ အခြားဂိမ်းများအတွက်စားပွဲ ၁၃ ခု၊ ၁၅ မှတ်
ကျောက်တုံး။ လိပ္စာ: Keј Dimitar Vlahov broј 1 Skopјe 1000. မြို့တော် Vardar ကျော်ပေါ်ရှိအထင်ရှားဆုံးတံတားများ။ တံတားကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးရောမခေတ်မှဒဏ္endာရီအရပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။
Macedonian အဘိဓါန်ရုန်းကန်၏ပြတိုက်။ လိပ်စာ - မတ် ၁၁ ရက်၊ Skopјe 11. ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Skopje Kale (Skopje ခံတပ်) ။ Address: Centar, Skopјe 1000. အလယ်ခေတ်ကာကွယ်ရေးစနစ်သည်မြို့လယ်ခေါင်တွင်တည်ရှိပြီးအရေးကြီးဆုံးရှေးဟောင်းသုတေသနအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။
Ohrid ၏စိန့်ကလီမန်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဘုရားကျောင်း။ လိပ္စာ: Bul ။ Sveti Kliment Ohridski, Skopјe 1000. ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်နာဇီများဖျက်ဆီးခဲ့သည့်တူညီသောဘုရားကျောင်းတည်ရှိရာနေရာတွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Saint Panteleimon ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း။ လိပ္စာ: Zagreb3Skopјe 1000. ၁၂ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောထူးခြားသော krestokupolny ဗိသုကာ၊ အစောပိုင်းခေတ်အလယ်ခေတ်ဗိသုကာ၏စံနမူနာကောင်း။
မက်ဆီဒိုးနီးယား - အလွန်မျိုးချစ်စိတ်နှင့်နိုင်ငံရေးတက်ကြွသောလူ။
Mandolin - မက်ဆီဒိုးနီးယားအမျိုးသားဂီတတူရိယာ။
တိုင်းပြည်5ရာစုနှစ်များစွာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဂီတအတွက်အလွန်ဆင်တူတူရကီသည်ဒါ, တာကအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Ohrid ရေကန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးနှစ် ၅ သန်းမျှဖြစ်သည်။
Oro - အမျိုးသားအက၊ အကနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္feetာန်များကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 Macedonian အဘိဓါန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3.2.1 Skopje ဆွဲဆောင်မှု